Online Resources | ओकलेग स्कूल र अर्ली वर्षहरु हस्तक्षेप केन्द्र
तल एक सूची अनलाइन संसाधनहरू जुन हामीले सोच्न सक्छौ तपाईको लागि रोचक वा उपयोगी हुन सक्छ। यद्यपि हामी यी लिङ्कहरू सटीक, अपग्रेड र सान्दर्भिक छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्दछौं, ओकलेigh विद्यालयले बाह्य प्रदायकहरूद्वारा रखिएको पृष्ठहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन।
यदि तपाइँसँग वेब साइटहरूको लागि कुनै सुझाव छ कि तपाईंले उपयोगी पाउनुभयो भने कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
यूट्यूबमा पहुँच गर्नुहोस् स्वत: युट्युब भिडियोहरू प्ले गर्नको लागि सहायक प्रविधिहरूको प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँचयोग्य इन्टरफेस हो। द्वारा अत्यधिक सिफारिस गरिएको इयान बीन.
YouTube पहुँच गर्नुहोस्
बच्चाहरु, बच्चाहरु र साना बच्चाहरु को लागी नि: शुल्क, मजेदार खेलहरु र गतिविधिहरु खोज्दै हुनुहुन्छ? CBeebies मजाको घर र शैक्षिक खेलहरू बच्चाहरू खेल्न र एकै समयमा सिक्नका लागि हो
CBeebies भ्रमण गर्नुहोस्
लिपि उपकरण 2017 को डाइरेक्टरी। शिक्षाको लागि 2,000 उपकरणहरू र शिक्षा र कार्यस्थलमा काम गर्ने। साइट जेन हार्टले सिक्न र प्रदर्शनको लागि नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगमा नि: शुल्क संसाधन साइटको रूपमा स्थापित भएको थियो। यो अहिले वेबमा रहेको विश्वको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको साइटहरू मध्ये एक हो।
C4LPT भ्रमण गर्नुहोस्
जडान ABILITY भिजुअल समर्थनहरू सिर्जना गर्न एक अद्भुत मुक्त स्रोत हो। ग्रिडको आकार छान्नुहोस्, छविहरू थप्नुहोस् जुन बोर्डमेकर चिन्हहरू, वा तपाईंको आफ्नै तस्बिरहरू समावेश गर्नुहोस्। छाप्नुहोस् र तिनीहरूलाई काट्नुहोस्! आमाबाबुको लागि एक उत्कृष्ट स्रोत पनि घर मा दृश्य समर्थन प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
कनेक्टिविटी भ्रमण गर्नुहोस्
यो व्हाइटबोर्ड कक्ष विद्यार्थीहरु को लागि गहन र गहन शिक्षण कठिनाइहरु संग अन्तरक्रियात्मक संसाधन को एक दायरा छ। यद्यपि लक्षित पारस्परिक सेतोबोर्डहरू प्रायः स्रोतहरू डेस्कटपमा समान रूपमा उपयोगी हुन्छन्।
यो ब्रान्ड नयाँ खण्ड सितभाषी एनएनएक्सएक्सबाट EQUALS वेबसाइटमा सुरू भएको धेरै नि: शुल्क शैक्षिक स्रोतहरू छन्।
समान भ्रमण गर्नुहोस् - व्हाइटबोर्ड कक्ष
HelpKidzLearn युवा बच्चाहरु को लागि सफ्टवेयर को एक संग्रह र उन सिकन को कठिनाइहरु संग अनलाइन खेलन को लागी हो। सफ्टवेयर पांच भागहरु मा विभाजित छ: प्रारम्भिक वर्षहरु, खेलहरु र क्विजिज, कहानियां र गाने, क्रिएटिव प्ले र बाहिर को बारे मा पता लगाएं।
HelpKidzLearn मा जानुहोस्
रिचर्ड हर्वेवडको Hirstwood प्रशिक्षण एक आईप्याड विचार पृष्ठ सिर्जना गरेको छ। समावेश गरिएको आईप्याड प्रशिक्षण मोड्युलहरू जुन तपाइँले मात्र क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो र पाठ मार्फत आफ्नो बाटो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ7घण्टाको प्रशिक्षण छ र यो सबैको लागि अहिलेको नि: शुल्क छ त्यसैले यो राम्रो जाँचको लागि बाहिर रहेको छ जब यो अझै पनि उपलब्ध छ।
Hirstwood प्रशिक्षण मा जानुहोस्
वेब साइट इयान बीनप्रिटोर वुड स्कूलमा पूर्व शिक्षक र आईसीटी समन्वयक, समावेशी टेक्नोलॉजीको परामर्श र प्रशिक्षण प्रबन्धकले अब आईसीटी र सहायक टेक्नोलोजीको प्रयोगमा विशेषज्ञहरुलाई आईसीटी सल्लाहकार र प्रशिक्षकलाई तीव्र र जटिल अतिरिक्त आवश्यकताहरु संग सबै उमेरका सिक्न सहयोग पुर्याउनेछ।
इयान बीन अनलाइन हेर्नुहोस्
समावेशी लन्डन वेबसाइट पूंजीमा पहुँचयोग्य स्थानहरू र गतिविधिहरू खोज्नको लागि संसाधन हो। यसमा पार्कहरू र अवकाश स्थलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, शौचालय, र यहाँका बैंक र हुलाक कार्यालयहरू पनि समावेश छन्। तपाईं आईप्याड / स्मार्टफोन अनुप्रयोगबाट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ iTunes.
समावेशी लन्डन भ्रमण गर्नुहोस्
घाइते ब्यानरहरू 2002 मा पंच रबिन्सन र उनको साथी कर्ट डोरममुथ द्वारा उनीहरूको आफ्नै बच्चाहरु को द्वारा बनाईएको थियो। त्यस समयमा, इन्टरनेटमा युवा बालबालिकाका लागि सबै खेलले खेलाडीलाई कार्य नियन्त्रण गर्न माउस प्रयोग गर्न आवश्यक छ। त्यसैले तिनीहरू एक लक्ष्य संग बाहिर निस्क्यो: खेलहरु को एक श्रृंखला बनाउन को लागी कि सबै भन्दा कम परिवार को सदस्य सजिलै संग खेल सकते हो। तपाईं आफ्नो बच्चालाई प्रोत्साहित गर्न, खेलकुद वा पूर्व-स्कुल बालबालिका र सिक्न प्रक्रिया सुरु गर्न शैक्षिक खेलहरू, रमाइलो गतिविधिहरू पाउनुहुनेछ।
घुटिएको ब्यानरहरू भ्रमण गर्नुहोस्
MERU (मेडिकल ईन्जिनियरिङ् रिसर्च यूनिट) युवा असक्षम व्यक्तिहरूको लागि अक्षमता उत्पादनको एक व्यक्तिगत डिजाइन र निर्माण सेवा प्रदान गर्दछ जब कुनै अन्य उत्पादनको आवश्यकताहरू पूरा गर्न कुनै पनि उत्पादन छैन। उनीहरूले अवस्थित अक्षमता उत्पादनहरूमा परिमार्जनहरू र क्षतिग्रस्त उपकरणहरू मरम्मत गर्न सक्छन्, साथसाथै अनुकूलन डिजाइन र नयाँ र जटिल वस्तुहरू निर्माण गर्न सक्छन्।
MERU भ्रमण गर्नुहोस्
यो NSPCC सँग मेल खाएको छ O2 इन्टरनेट, सोशल सञ्जालहरू, अनुप्रयोगहरू, खेलहरू र बाहिरका प्रयोग गर्दा उनीहरूको बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नुहोस्। चाहे तपाईं आमाबाबु नियन्त्रणहरू सेट गर्न चाहनुहुन्छ, गोपनीयता सेटिङ्हरू समायोजन गर्नुहोस् वा सोशल सञ्जालहरूमा सल्लाह प्राप्त गर्नुहोस्, नि: शुल्क O2 र NSPCC मद्दतलाइनका विशेषज्ञहरू मद्दतका लागि त्यहाँ छन्। तिनीहरूलाई 0808 800 5002 मा कल गर्नुहोस्।
NSPCC र O2 मा जानुहोस् - बच्चाहरूलाई अनलाइन सुरक्षित राख्नुहोस्
यो sen / ict निर्देशिका जानकारी र संसाधनहरू विशेष गरी वरिपरी इकट्ठा गर्न सेट अप गरिएको छ। शिक्षकहरू र आमाबाबुहरूले उपयोगी वेबसाइटहरू र अनलाईन स्रोतहरू सूचीबद्ध गर्न सक्छन्। कम्पनीहरूले आफैले र आफ्नो उत्पादनहरू जस्तै सफ्टवेयर, हार्डवेयर र उपकरणहरू प्रस्तुत गर्न सक्दछ जुन कार्यहरू र कार्यक्रमहरू तपाइँसँग चासो हुन सक्छ।
SEN ICT निर्देशिका भ्रमण गर्नुहोस्
विशेष संसार समावेशी टेक्नोलोजी द्वारा एक नि: शुल्क अनलाइन सेवा हो जो कि नवीनतम समाचार, घटनाक्रम, घटनाहरु र जानकारी संग संपर्क मा दुनिया भर को विशेष शिक्षा मा शामिल राखन को लागि।
विशेष विश्व भ्रमण गर्नुहोस्
At टेट बच्चाहरु नि: शुल्क कला गेमहरू र रमाईलो प्रश्नहरू बजाउनुहोस्, कला गतिविधिहरू खोज्नुहोस्, कलाकारहरूको बारेमा पढ्नुहोस् र आफ्नो कला साझेदारी गर्नुहोस्। का लागि उत्तम कला वेबसाइट बच्चाहरु.
टेट बच्चाहरू भ्रमण गर्नुहोस्
शिक्षण विचारहरू हजारौं निःशुल्क पाठ विचारहरू, गतिविधिहरू र स्रोतहरू जुन तपाईं आफ्नो कक्षा कोठामा वा घरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
शिक्षण विचारहरू हेर्नुहोस्